Mandroso ho aiza ? - SARONDRAHONA RAMBOLAMANANA - Tononkalo Malagasy - Serasera.org
Mandroso ho aiza ? - SARONDRAHONA RAMBOLAMANANA
MANDROSO HO AIZA
Tsy mbola mety ho tonga any amin’ny zavatra noeritreretiko ny vokatry ny fikarohana ataon’ny zanak’olombelona hatreto. Mandao zavatra iray sy miantsampy amin-javatra hafa izy, vao manomboka ho afa-po fa manitsaka ny fandrosoana ; ary hita taratra etsy sy eroa izany, indrindra fa any amin’ireo « Firenena kely hery sy mbola miantehatra ny tanan’ny vaventy ».
Mandroso ihany tokoa, raha ekena fa tanaty ala no fonenan’ny olona fahiny, tanaty lava-bato ; nihinana hena manta, niantehatra lelan’afo avy tamin’ny fampifampikasoam-bato ho an’ny firenena sasany ary niaina tamin’ny fiotazana sy fitsimponam-boankazo masak’andro ho an’ny hafa, kanefa dia efa manana fandrehitra ara-dalàna ho loharanon’afo ankehitriny, ary misy vilàny, misy vilia, antsy… sy ny sisa ho fikarakarana sakafo mahavelona sy ara-dalàna, manjary mitoetra amina trano arovan’ny rindrina matevina sy tsy andrian’ny fanala. Tsy mandroso kosa ary ve ny fialàna tamin’ny tsizarizary mankamin’ny ara-dalàna ? Ny fandaozana ny kisendrasendra ho amina rindram-pivelomana maty paika ? mba mandroso kosa hoy aho, rehefa avy amin’ny maizina no tonga amin’ny mazava !
Saingy diso hevitra mihitsy ny olona sasany raha mihevitra fa ny fiantsampazana amina fandrosoan’olona no anariana ny zava-masina amin’ny tena. Ho antsika Malagasy, masina ny tany, masina ny teny, masina ny sata sy ny riba mamaritra ny maha – MALAGASY ; Kanefa dia ataon’ny sasany ho zava –tsinotsinona akory izany, rehefa matimatiny amin’ny fankahan –tahaka be fahatany tsy voalanjalanja izy : tsy tia tenin –drazana fa mihambo ho vahiny, nefa dia eto an –tanindrazana na nivahiny kely folo taona tany ivelany , manadino Tanindrazana fa seriny amin’ny fanangonan-karena any am –pitan –dranomasina, izay heveriny fa mariky ny fandrosoana raha miohatra amin’ireo Mpiray tanindrazana aminy. Ary ny fahotana mahafaty indrindra vitantsika eo anatrehan’ny maha –teratany MALAGASY, dia ny efa fanovantsika ho tsinontsinona tanteraka ny tsiny sy ny tody izay arofanina natanjaka teo amin’ny Ntaolo Malagasy. Hany ka tsy gaga intsony isika raha mandre amin’ireo fampitam –baovao ny karazan –kerisetra sy sinto-mahery eto amintsika , ary toa tsy zava –mahatahotra sy tsy ananana ahiahy intsony ankehitriny ny fandripahana olona sy fandatsahana aina.
Asa na ireo fomba fiaina vahiny aterina eto isan’andro, na ireo horonan-tsary efa tsy voasivana intsony ho andrim-panabeazana ho an’ny vahoaka no nanova antsika ho angady malalaka anjarany ; na ny vaninandro diavina mihitsy no efa maratra, fa tonga poizina ho antsika ny fandrosoana raha any amin’ny vololon’ain’ny maha-Malagasy mihitsy no potipotiny.
Marina fa ilaintsika ny fandrosoana, nefa tsy tokony hitomany randrana manendrika ny hafa fa mba fantarina izay mba sahaza ny an’ny tena, ary tsy natao hamotehana ny zava –masina kosa sanatria, fa tokony hanandratra izany ho amin’ny seha –pivoarana avo lenta. Fa raha ny lehilahy mitomany ho vehivavy, ary ny vehivavy mitomany ho lehilahy, dia aiza intsony ny fandalàna ny anjara sy ny lahatra ary ny tendry ? sady raha tsy ho voatanantsika intsony ny hevitry ny teny hoe : « FADY », dia mba fandrosoana mankaiza izany ?
Zoma 05 Martsa 2004
Faribolana SANDRATRA Antananarivo
Daty : 16/06/2004
Mpamangy : 2655